SnapChat သည်သင်၏ ၀ ယ်သူ၏ဝယ်သူခရီးအတွက်နောက်ထပ်အဆင့်ဖြစ်နိုင်သလား။
ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 16, 2015 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 15, 2017 တိ Hickle
လူတိုင်းကဒီအချက်မှာ Snapchat အကြောင်းသိတယ်ဟုတ်လား? ဒီတစ်ခုပေါ်မှာမှောင်မိုက်၌နေဆဲမည်သူမဆို? သို့ဆိုလျှင်၊ သင်သိရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာအသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောလဟာလသတင်းများအရဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံ၊ ဘယ်သူမှငွေမချသလိုခံစားရတယ်.
အခုဒီအပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်ဒီဇိုင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ Snapchat ၌သင်အမှန်တကယ်ကြော်ငြာနိုင်သည့်နေရာအနည်းငယ်သာရှိပြီး၎င်းတို့သည်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ သင်သည် Live Live Stories ရှိကြော်ငြာများအတွက်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၁၀ စက္ကန့်အကြိုကြိုတင်ကြိုတင်နေရာယူထားသည်။ အသုံးပြုသူများသည်စောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲအလွယ်တကူနှိပ်နိုင်သည်။ CNN မှ Comedy Central အထိသတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဆိုဒ်များကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်အသင့်ဖြစ်နေသောသူတို့၏“ Discover” အင်္ဂါရပ်အသစ်ကိုသင်ကြော်ငြာနိုင်သည်။ သင်အမှန်တကယ်စျေးကြီးပြီးအမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်ကိုတကယ်ခန့်မှန်းရခက်တိုးချင်မဟုတ်လျှင်ဤရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးတော်တော်လေးဆိုးပါတယ်။
မည်သူမျှမမေးသောမေးခွန်းမှာ Snapchat ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်သည် သိ အလုပ်လုပ်ပြီးပြီလား လူအများစုကလူမှုရေးကွန်ယက်ကိုလမ်းကြောင်း (မှားယွင်းမှု) အဖြစ်ချန်လှပ်ထားကြသည် ကွောကျသော သူတို့ကအဲဒါကိုနားမလည်ကြတဲ့အတွက်ကွန်ယက်မှာကစားခြင်း (ပိုကြီးတဲ့အမှား) ။ ဒါကြောင့်လူတွေဟာငါလိုမိုက်မဲတဲ့ကလေးတွေကိုပိုက်ဆံပေးပြီးဒီနည်းပညာအသစ်တွေနဲ့လာကစားကြတာပေါ့ အံ့အားသင့် စာသားအရလူအများကသူတို့လက်ချောင်းထိပ်နားမှာဘာရှိသလဲဆိုတာမသိကြဘူး။
ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သောညဥ့်နက်၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဒေသတွင်းလက်လီရောင်းချခြင်းများအပါအ ၀ င်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဒါဇင်ခန့်ကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားနိုင်သည် အခမဲ့ဒြပ်စင် Snapchat ၏သူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာသို့ရောက်လာသည်။ ၎င်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်သမားအားလုံးလိုက်နာသောသမ္မာကျမ်းစာထဲမှအရာများဖြစ်သည်။ ၀ ယ်သူ၏ခရီး။
သငျသညျစာဖတ်ခြင်းခံရဖို့လုံလောက်တဲ့ပါးရည်နပ်ရည်နေလျှင် Martech Zoneရိုးရာ ၀ ယ်သူ၏ခရီးအကြောင်းကိုသင်သေချာသိပါသည် ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုဤပုံစံတွင်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ညီသောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူမှချမှတ်ထားသောကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ပထမ ဦး စွာဖောက်သည်တစ် ဦး ၌သူတို့၌ပြproblemနာရှိနေသည်ကိုသဘောပေါက်သည်၊ ထို့နောက်သူတို့သည်ဖြေရှင်းချက်များကိုစတင်လေ့လာကြသည်၊ ထို့နောက်သင်၏ဖြေရှင်းမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပြီးဝယ်ယူကြသည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်၎င်းကိုထောက်ခံသူဖြစ်လာသည်။ အရမ်းသန့်ရှင်းလွန်းတယ်၊ နီးပါးလွန်းသန့်ရှင်းပြီးအရမ်းရိုးရှင်း ...
ဒါကြောင့်လို့ပဲ B2B အာကာသထဲမှာ၊ အလွန် သက်ဆိုင်ရာ။ B2C အာကာသထဲမှာပေါ့ တခါတလေ သက်ဆိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖော်မြူလာထက်လက်မ၏စည်းကမ်းနှင့်ဆင်တူသည်။ ဒါကြောင့် Snapchat လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကိုက်ညီရန်ဤလက်မ၏စည်းမျဉ်းကိုသင်ဘယ်လိုညှိနိူင်မလဲ။
မျိုးဆက်တစ်ခုမှစကြပါစို့။ အနှစ်တစ်ထောင်အတွင်းစျေးကွက်တင်ဖို့နောက်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကိုရေးဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာမရှိပါဘူး။ ၎င်းတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်ရန်အသက်ကြီးလွန်းသောသူများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးကိုနားလည်ရန်ငယ်လွန်းသူများရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုလည်းစိတ်မဝင်စားပါ။ သို့ရာတွင်လူငယ်များသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့စားသုံးသည်နှင့်စျေးကွက်သမားများ၏မော်ဒယ်များအကြားကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိသည် မှတ်ယူ သူတို့ကသတင်းအချက်အလက်ကိုလောင်။
ဥပမာအားဖြင့်နှစ်တစ်ထောင်လုံးသည်ကြော်ငြာကိုမယုံခြင်းကြောင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးလူအများအပြားထိုနေရာတွင်ရပ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမမေးသောအရာကိုဖြစ်ပါတယ် ဘယ်နှစ်ထောင်စုနှစ်ကိုငါတို့ပြောနေတာလဲ
ငွေအများဆုံးရှိသောအထူးချွန်ဆုံးသောကြော်ငြာများသည်ကြော်ငြာကိုအယုံအကြည်မရှိသော်လည်းသုတေသနကိုနှစ်သက်ကြပြီးသူတို့တကယ်ချစ်ကြသည် resonate ဖို့ကြိုးစားသူကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ် သူတို့နှင့်အတူ။ သူတို့သည်လူများ၏အသိပညာဗဟုသုတနှင့်အတူကြီးပြင်းလာခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့သည်ဘားအလောင်းအစားများကိုဆုံးဖြတ်ရန်၊ သူတို့၏လည်ချောင်းနာခြင်းကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သူတို့၏ငွေကိုမည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာ၌သုံးစွဲရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအုပ်စုအတွက်လူမှုရေးအထောက်အထားသည်ဘုရင်ဖြစ်သည်၊ အလွန်အကျွံစီးပွားဖြစ်ပုံရသောအရာအားလုံးသည်၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုကိုဆုံးရှုံးစေသည်။
ဒါကြောင့်ဒီအရေးအကြီးဆုံးမေးခွန်းကပေါ်လာတဲ့စျေးကွက်ကိုမလိုချင်တဲ့လူ ဦး ရေကဏ္ to ကိုကြော်ငြာသူများကိုစျေးကွက်တင်ဖို့မပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုငါဘယ်လိုငှားနိုင်မလဲ။
Snapchat ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု Snapchat ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်ထက်လွန်လွန်သွား
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း Miles Design မှကျွန်ုပ်အဖွဲ့သည်ရှိခဲ့သည် Snapchat စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူစမ်းသပ်စင်မြင့်ပေါ်တွင်လုံးဝလွတ်လပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအမှန်တကယ်မောင်းနှင်နိုင်သည့်အလားအလာအချို့ရှိပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းကဘားတစ်လုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုပါစို့၊ သူတို့ငယ်ရွယ်သောအ ၀ င်ငွေ ၂၀ ကိုအိမ်ထဲ ၀ င်ရောက်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်များစွာသောသောက်ရေအထူးများ၊ အသေးအဖွဲညများ၊ တေးဂီတစသည်တို့ပါဝင်သည်။ သို့သော်ဤမက်လုံးများသည်သင့်တည်နေရာပြင်ပရှိအခြားမည်သည့်ကြော်ငြာပုံစံထက်မဆိုသင်၏တည်နေရာအပြင်ဘက်ရှိအမှတ်အသားများအပေါ် ပို၍ မှီခိုသည်။ ၀ ယ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေရန်သင်မက်လုံးပေးရန်လူများကိုသင့်တည်နေရာသို့မောင်းထုတ်ရန်လိုအပ်လျှင်ကော။
geo-filter များအပါအ ၀ င်လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုအနေဖြင့် Snapchat နှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ယခု Snapchat သည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက် geo-filter တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည် လိမ့်မည် သင်၏နယ်မြေအတွက် geo-filter တစ်ခုဖန်တီးပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအကန့်အသတ်မရှိကြာရှည်စေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာတစ်စုံတစ် ဦး ကတောအုပ်သို့သင်၏လည်ပင်းသို့လာသောအခါသင်၏သူငယ်ချင်းများကို Snapchatting လုပ်သည့်အခါသင်၏ geofilter ကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအရောင်းမြှင့်တင်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။ (ကျွန်တော်တို့ကို geofilter ဖြင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်။ အခမဲ့သောက်ရန် ၀ င်ပါ။ ) သင်သည်လပေါင်းများစွာအတွင်းသင်၏စံပြလူ ဦး ရေနှင့်အတူဆိုရှယ်မီဒီယာယန္တရားဖြစ်လာနိုင်သည်။
ငါလည်းဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ Snapchat အမှန်တကယ်ရှိပါတယ် Uber မှအင်ဂျင်နီယာများခိုးယူရန် Geofilters ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါထင်တာကသူတို့အဲဒီမှာမရပ်ဘူး။ ဒီနည်းပညာအတွက်လျှောက်လွှာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ သင်စမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်။
ဤအရာအားလုံးသည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Snapchat သည်အသစ်မဟုတ်ပါ။ သုံးစွဲသူများအားအတွေ့အကြုံများစွာနှင့်ဆက်သွယ်ရန်နှင့်ထိတွေ့ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးအပ်လျှင်သင်အနိုင်ရလိမ့်မည်။ ငယ်ရွယ်သောလူစုလူဝေးနှင့်ထိတွေ့ရန်ရှာဖွေနေသည့် B2C အမှတ်တံဆိပ်အမြောက်အများအတွက်၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးအဘယ်ကြောင့်ကြောက်နေကြသနည်း။
သငျသညျစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, နည်းပညာသို့မဟုတ်သူတို့၏သား ဦး, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Tech မှအကြောင်းပြောဆိုလိုပါကငါပြောနေတာကြိုက်တယ်။ စောင့်ရှောက်လော့ စကားပြောဆိုမှုတွစ်တာတွင်သွား နောက်ပြီးမင်းဘာအကြောင်းဖတ်ချင်လဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ။
Tags: ရက်စက်စွာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုင်ဒီဇိုင်းအနှစ်တစ်ထောင်SnapchatSnapchat စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ဘောဂဗေဒမှဟာသအထိအမျိုးမျိုးသောနောက်ခံရှိခြင်းကြောင့်ဒစ်ခ်ဟစ်ခ်ျသည်ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနေရာတွင်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ယနေ့တိသည်မိုင်ဒီဇိုင်းအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။ သူ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကြီးထွားလာသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကုမ္ပဏီသည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အီးမေးလ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအပါအ ၀ င်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းမှုများစာရင်းပြုစုရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။
သင်သည်ဆက်သွယ်လိုပါက TimHickle@gmail.com သို့အီးမေးလ်ကို Tim ရိုက်ရန်သို့မဟုတ်တွစ်တာ @TimHickle တွင်ဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏ Instagram အရောင်းမြှင့်တင်ရေးသို့မဟုတ် Campaign ကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်၊